शाहरुख खान काठमाडौंमा (भिडियो)
Published: March 9, 2015 17:27 PM
काठमाडौं, फाल्गुन २५ । बलिउडका चर्चित अभिनेता शाहरुख खान सोमबार काठमाडौं आएका छन् ।नेरोल्याक पेन्ट्सको कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी आफ्नो निजी विमानबाट काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।अपरान्ह ४ बजे काठमाडौं आइपुगेका शाहरुखको विमान अवतरण गराउनेक्रममा आधा दर्जन बढी विमानहरु आकाशमै ‘होल्ड’ गराउनु परेको थियो ।शाहरुख...
विवादास्पद ‘इण्डियाज डटर’ अमेरिकामा प्रदर्शन हुने
Published: March 9, 2015 12:25 PM
काठमाडौं, फाल्गुन २४ । निकै विवादास्पद बनेको भारतीय बृतचित्र ‘इडियाज डटर’ अमेरिकामा प्रदर्शन हुने भएको छ । आगामी मार्चमा अमेरिकामा प्रदर्शन गर्न लागेको बृतचित्रमा हलिउड अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप र फ्रीडा पिंटो पनि सहभागी हुनेछन् । यो बृतचित्र अमेरिकामा मात्र नभई स्वीटजर्ल्याण्ड,...
पत्रकार रविन्द्र मिश्रको कविता संग्रह सार्वजनिक
Published: March 8, 2015 15:33 PM
काठमाडौं, फाल्गुन २३ । बीबीसी नेपाली सेवामा कार्यरत पत्रकार रविन्द्र मिश्रले लेखेका कविताहरुको संग्रह राजधानीमा सार्वजनिक भएको छ । फाइन प्रिन्टले प्रकाशनमा ल्याएको ५४ वटा कविता समावेश गरिएको संग्रहमा प्रेम, देशभक्ति, विदेशको बसाई, अध्यात्म र दर्शनजस्ता विषयलाई समेटिएको छ । पुस्तकको...
प्रताप लामा भए नेपाली तारा,मोटरसाइकल र अढाइ लाख पुरस्कार
Published: March 6, 2015 18:41 PM
काठमाडौं, फाल्गुन २२ । सांगीतिक रियालिटी शो ‘कोकाकोला नेपाली तारा ३’ को उपाधि प्रताप लामाले चुम्न सफल भएका छन् । निर्णायकबाट प्राप्त अंकमा दर्शकको भोटको आधारमा नेपाली तारा ३ को उपाधि लामाले प्राप्त गरेका हुन् । विजेताले एउटा बजाज डिस्कोभर मोटरसाइकलसहित २ लाख ५० हजार...
यो हप्ता तीन सिनेमा, कसले मार्ला बाजी ?
Published: March 6, 2015 15:52 PM
काठमाडौं, फाल्गुन २२ । फ्राईडे रिलिज अन्तर्गत यो हप्ता तीन नेपाली सिनेमा प्रदर्शनमा आएका छन् । अघिल्लो हप्ता प्रदर्शनमा आएका दुई सिनेमा ‘अझै पनि’ र ‘मिसन पैसा रिलोडेड’ले दर्शकको मन जित्न संघर्ष गर्दैगर्दा खासै सफल हुन सकेनन् । त्यस्तै यो हप्ता भने दुई हैन,...
हङकङमा थिरजले गाउँदा दर्शकको आँशु खस्यो
Published: March 5, 2015 17:19 PM
काठमाडौं, फाल्गुन २१ । ‘प्रेमवाद’ आत्यात्मिक अभियान मार्फत संगित क्षेत्रमा स्थापित भएका गायक थिरज राईले हङकङमा सयौं नेपालीलाई आफ्नो प्रस्तुति मार्फत संगीतको स्वाद चखाएका छन् । आफ्नो एकल सांगीतिक यात्राका क्रममा मलेसिया, बैंकक, सिंगापुर हुँदै हङकङ पुगेका राईले त्यहाँस्थित नमोबुद्ध क्लबको सभाहलमा...
निर्देशक श्रेष्ठका छोरा अभिषेक र सन्ध्याको यस्तो प्रेम (भिडियोसहित)
Published: March 4, 2015 15:47 PM
काठमाडौं, फाल्गुन २० । अभिनेता भुवन केसीको आफ्नो चलचित्रमा डेब्यू गर्न लागेकी ईमेज च्यानलमा कार्यरत भिजे सन्ध्या केसी र निर्देशक सुरज श्रेष्ठका छोरा अभिषेक श्रेष्ठ एउटा म्यूजिक भिडियोमा गज्जबले जमेका छन् । प्राश्ना शाक्यको स्वरमा रहेको ‘मुटु नचिरिदेउ..’ बोलको गीतमा सन्ध्या र अभिषेकको जोडी राम्ररी जमेको...
सानेले निर्देशन गरेको ‘लाटी’ जेठमा रिलिज हुने
Published: March 2, 2015 09:31 AM
काठमाडौं, फाल्गुन १८ । नेपाली मौलिक कथा उठान गरेको चलचित्र ‘लाटी’को अफिसियल पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । निर्माता शिशिरजय खरेलको जन्मदिनको छेकोमा चलचित्र युनिटले अफिसियल पोस्टर सार्वजनिक गर्दै रिलिज मिति पनि तर गर्यो । यो चलचित्र आउँदो २०७२ सालको जेठ १ मा रिलिज हुने...
सर्वनाममा १० मिनेटका मात्र नाटक ?
Published: March 1, 2015 05:29 AM
काठमाडौं, फाल्गुन १७ । सधैंजसो घण्टा लामो नाटक मञ्चन भइरहने सर्वनाम थिएटरमा शनिवार १० मिनेटका छोटा सात नाटक मञ्चन भए । ‘दश मिनेट नाटक मेला’का अवसरमा यी नाटक मञ्चन भएका हुन । मेला संभवत नेपालमै नौलो प्रयोग मानिएको छ । बिशेषत युवा बर्गको रंगमञ्च प्रति बढ्दै गएको आकर्षण तथा युवा रंगकर्मीहरुको...
हलिउड अभिनेत्री लुपिटाको बहुमूल्य कपडा चोरियो
Published: February 27, 2015 04:04 AM
काठमाडौं, फाल्गुन १५ । चर्चित अस्कर अवार्ड समारोहका लागि हलिउड पुगेकी केन्याकी नायिका लुपिटा न्योङ्गको बहुमूल्य कपडा चोरी भएको छ ।केही दिनअघि सम्पन्न अस्कर अवार्ड समारोहका लागि तयार पारिएको विशेष पहिरन नायिका लुपिटाको होटलबाटै चोरी भएको हो ।झन्डै ६ हजार दाना सेतो मोती जडित बहुमूल्य कपडाको मूल्य १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर रहेको...
बालमनोविज्ञान र यौनमा बन्यो चलचित्र ‘छायाँ’
Published: February 25, 2015 12:42 PM
काठमाडौं, फाल्गुन १३ । बालमनोविज्ञान, यौन तथा शारीरिक सम्बन्ध, अभिभावकसगँको दुरी, त्यसबाट उत्पन्न हुने द्धन्द्ध र समाधानलाई विषयवस्तु बनाइएको चलचित्र ‘छायाँ’को ‘ट्रेलर’ र पोस्टर सार्वजनिक भएको छ ।इन्ट्याक्ट मिडियाको प्रस्तुति र भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनको निर्माणमा बनेको चलचित्र ‘छायाँ’लाई मनोज पण्डितले निर्देशन...
‘बर्डम्यान’ले जित्यो यस वर्षको अस्कर अवार्ड
Published: February 23, 2015 09:43 AM
काठमाडौं, फाल्गुन ११ । यस वर्षको अस्कर अवार्डमा ‘बर्डम्यान’ फिल्मले सर्वोत्कृष्ट फिल्मको पुरस्कार जितेको छ ।बेलायती अभिनेता एडी रेडम्यानले ‘द थेउरी अफ एभ्रिथिङ’ फिल्मका लागि सर्वोत्कृष्ट अभिनेताको पुरस्कार जितेका छन् । अल्जाइमर रोगबाट पीडित वैज्ञानिक स्टिफन हकिङस्को जीवनमा आधारित यस फिल्ममा अभिनेता जुलियन डाक्टर...
Published: February 17, 2015 05:54 AM
काठमाडौं, फाल्गुन ५ । चैत्र ६ लाई प्रदर्शन मिति तोकेको चलचित्र ‘धुन’को रिलिजको मिति सरेको छ । प्रदर्शनको लागी तोकिएको दिन नजिकिँदै गर्दा चलचित्रको प्राविधिक काम नसकिएको र पब्लिसिटी पनि नपुग्ने अवस्था आएको भन्दै निर्माण युनिटले चलचित्रको रिलिज मिति सारेको हो । ‘हामी जुन तयारीका साथ लागिरहेका थियौँ,...
सरकारको सरसफाइ दूतमा ‘धुर्मुस’ र ‘सुन्तली’ नियुक्त
Published: February 12, 2015 08:48 AM
‘सिमसिमे पानी’मा रेखाको कामुक अवतार (भिडियो)
Published: February 9, 2015 13:19 PM
काठमाडौं, माघ २६ । गायिका रेखा शाहको चर्चित गीत ‘सिमसिमे पानी’को नयाँ म्यूजिक भिडियो हालैमा सार्वजनिक भएको छ । रेडियो नेपालमा २१ वर्षअघि ‘सिमसिमे पानीमा’ गाएर चर्चा बटुलेकी गायिका रेखाले सोही गीतलाई पुनः रेकर्ड गरेर नयाँ म्यूजिक भिडियो बनाएकी हुन् ।नेपाली संगीतजगतमा अत्यन्तै रुचाइएको गीत ‘सिमसिमे पानी’को...
पहिलो पछिल्लो101112131415161718अर्को अन्तिम